Waayo, qaar badan oo naga mid ah, music waa nooc ka mid ah baxsadaa helo Maskaxdaada ka saar wax kasta oo kale. Mid ka mid ah abaalmarinno ee lahaanshaha casriga ah waa in ay music helaan si joogto ah. Maalmahan, waxaa jira wax badan oo Chine geeyo music diyaar u Windows Phones sidaas ma jirto sabab aad u seego qiyaas oo therapy music aad.
1. Dhegayso (4.4 / 5 stars)
2. Spotify (4.5 / 5 stars)
3. Pandora (4.1 / 5 stars)
4. NiQi Music Player (4.1 / 5 stars)
5. Beem Plus (4.5 / 5 stars)
6. Dhammaan Music Unlimited (4.2 / 5 stars)
7. AudioCloud (4.6 / 5 stars)
8. Music + (4.6 / 5 stars)
Tani waa ciyaaryahanka go-muusikada inta badan dadka isticmaala Windows Phone. Waxaad awoodi doontaa in aad u maamuli lahayd music muuqan oo aan dadaal badan. Waa Live Tile taageeray si aad awood u yeelan doonaan in ay arkaan taas oo track ayaa haatan u ciyaaro, xitaa marka app la ordaya ee asalka ah. Waxa ay leeyihiin version premium ah, laakiin waxaa loo baahan yahay oo keliya haddii aad rabto in aad saamayn muuqaal gaar ah iyo music auto-ciyaar.
Faa'iido : gacanta ku dareen leh; si xor ah u isticmaalaan.
Qasaarooyinka : Miyuu cayayaanka qaarkood u baahan tahay in la hagaajiyo, u baahan tahay qaar ka mid ah casriyaynta feature.
Waxa kale oo multi-madal music socon geeyo app waa Spotify. App wuxuu kuu ogolaanaya in ay "star" hees kaas oo lagu dari doonaa maktabadda music generic galay oo buuxda lacagta aan xad lahayn ee playlists. Version premium wuxuu kuu ogol yahay inuu u ciyaaro playlists bixi marka aad offline tahay. Dhibaatada kaliya iyadoo ay xulashada waa in aanay ahayn sida hormartay sida qaybaha kale ee nidaamyada kale ee hawlgalka. Sidaas, haddii aad isticmaasho adeegga ka soo tebiyaan tusaale desktop kale ama iPad, iyo darto heeso cusub ee playlist ah, ma awoodi doonaan in ay hagaagsan oo aad Windows Phone.
Faa'iido : Available ku dhufto ee ugu; kartida in la abuuro iyo astaysto playlists; offline loo maqli karo in lagu qabto adeegidda joogtada ah ee caymiska.
Qasaarooyinka : The Phone version Windows waa ineysan marka la barbar dhigo versions kale.
Hadda Mid ka mid ah adeegyada ugu caansan geeyo music ayaa diyaar u ah Windows Phones. Waa ah idaacad internet DIY halkaas oo aad ka dooran oo gabayaa ahaa ama song in aad rabto iyo waxa ay si toos ah ay abuuri doonaan saldhig playlist ku saabsan doorashada. Waxa kale oo aad fursad u heysan doonto si ay u iibsadaan heeso aad jeceshahay on Madaxweyne Siilaanyo Oo Music. Tile The Live shaashadda aad telefoonka ee muujin doonaa track hadda oo la ciyaaro iyo xitaa aad wareemo karo idaacadaha ugu jeceshahay in aad on your screen guriga.
Faa'iido : Great in la ogaado music cusub oo ku salaysan doorashadaada jira; waxaa jira version ah oo lacag la'aan ah oo ah lacagta bil kasta oo ah adeegidda laga lacagta u yar yahay $ 5 bil.
Qasaarooyinka : Ma awoodo in uu buuxda playlist gaar; ma taageeri offline loo maqli karo.
Ciyaaryahan buunbuuninayo-free music ah, kala soo bixi NiQi Music Player in guraan karaa music by dhawr qaybood sida heeso, farshaxan, iwm albums Waa sahlan tahay in ugu rogto iyada oo u dhexeeya qaybaha - kaliya aad u baahan tahay inaad xaq u tagay weerar dadban ama si aad u hesho si ay ula socdaan in aad rabto in ay dhagaystaan. Muuqaal ayaa sidoo kale ku hayn karaa aad marti qaaday sida ay swirls tahay album, halka music la ciyaaro.
Faa'iido : interface waa mid aad u dareen leh; Live Tile taageeray; leeyihiin feature jadwaliye ah.
Qasaarooyinka : duwan ciddi leh oo muusiko ah laga heli karo ay maktabadda.
Beem Plus waa app dhinac saddexaad u Digital laga keeno sida DI.FM (ee www.di.fm ), waxaa app geeyo music u khayroon kuwa sida music elektaroonik ah samaynta. Version The free bixiyaa tiro balaadhan oo ah saldhigyada in ciyaara tayo sare leh keegag EDM iyo music at qiimaha advertising si kaladuwan. Ilaa hadda, sameeysa ah ayaa si firfircoon uga xariirta app ku salaysan-celin users ', waa mid ka mid ah music buggy agagaarka app yar geeyo samaynta.
Faa'iido : Helitaanka in tiro balaadhan oo ah saldhigyada; deggan iyadoo cayayaanka aan wax badan; oo ay taageerayaan OneDrive iyo Last.fm.
Qasaarooyinka : Kaliya racfaan kuwa mahad music elektaroonik ah.
Waayo, il music aan xad lahayn oo lacag la'aan ah, waxaad u baahan tahay oo dhan waa Music Unlimited laga bilaabo heeso caan ah si garaaca dhulka hoostiisa. Waxaad awoodi doontaa inaad si ay u abuuraan dhawr playlists oo iyaga ka soo dejisan u offline loo maqli karo mar kasta oo aad rabto.
Faa'iido : duwan Wide of music in ay maktabadda; daboolayaa ku sifayn badan.
Qasaarooyinka : Qaar ka mid ah lagu daydo Phone Windows; waxa ay leedahay u janjeera in ay dib uga bilowdo ka dib markii uu dhowr heeso.
App dhinac saddexaad SoundCloud ee Windows Phone, AudioCloud, users u saamaxaaya in ay baadhaan oo baadhaan kuwan raadkaygay music la heli karo in ay maktabadda. Tan iyo talanti oo ay awoodaan in ay geliyaan abuurka online, app waa hab fiican oo u isticmaala in la ogaado talanti cusub. Adeegga internetka waxaa diiradda bulsho, app ka taageertaa dadka isticmaala, kooxaha, playlists, dib u eegista iwm Waxa kale oo aad kala socon kartaa talanti oo aad jeceshahay in aad updated markii ay geliyaan waxyaabo cusub.
Faa'iido : gebi ahaanba bilaash ah si ay u isticmaalaan.
Qasaarooyinka : Maaha Windows Phone app rasmi ah.
Haddii aad tahay ayaa labadaba musically iyo muuqaal u shidan yihiin, aad u jeclaan doonaa Music +. Waxaad awoodi doontaa in astaysto maqaarka playlist dusheeda oo ka mid ah Sideed mawduuc qurux badan dhisay-in. App Waa wax fudud in falgali iyo badhannada waa laga abaabuli karaa. Waxaad awoodi doontaa inay gabyaan oo ay la socdaan sida ay leedahay taageero lyrics.
Faa'iido : Simple inay shaqeeyaan; arki karin heesaha ugu soo ciyaaray.
Qasaarooyinka : Waxa uu ahaa in muddo ah tan iyo markii ay update ee la soo dhaafay.
Waxaa jira badan oo Chine music weyn diyaar u Windows Phone dukaanka app. Tan waxaan ku khasbannahay in uu xad u liiska, waa runtii adag tahay in dad. Dabcan, waxa ay ku xiran tahay waxa aad rabto in aad ka app music. Haddii aadan hubin inaad kala soo baxdo, degso oo isticmaal, had iyo jeer xasuuso in aad ka akhriyi u eegid si loogu caawiyo in aad soo koobto hoos si ay u sameeyaan go'aankaaga.
> Resource > Windows > Top 8 Music for Windows Apps Phones